डाक्टर साहेबलाई खुल्ला पत्र | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
डाक्टर साहेबलाई खुल्ला पत्र
साउन ९, २०७५ बुधबार १८:३६:३१ | राधेश्याम खतिवडा
डाक्टर साहेब नमस्कार,
भेटेरै कुरा गरेको भए पनि हुने थियो । बिरामी भएर उपचारको लागि तपाईंको अगाडि पुग्दासम्म त बिरामीसँग खुलेर सबै कुरा सोध्न नभ्याउने तपाईंहरुले हामीलाई समय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । अझ अहिले त आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनुहुन्छ । त्यही भएर यहाँबाट खुल्ला पत्र लेख्दैछु ।
अस्पतालमा सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनुभएको छ । बेथिति अन्त्यको लागि होला । स्वस्थ्य क्षेत्रमा बेथिती अन्त्य होस् । हाम्रो पनि शुभकामना । तर आफू र आफ्नै भित्र भएका कमजोरीको विषयमा चाहिँ समीक्षा गर्नु पर्दैन ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथितिको हिस्सेदार तपाईं पनि हो कि होइन ?
बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेकालाई बिचल्ली पारेर सडकमा आन्दोलन गर्न जान तपाईंको मनले कसरी मान्यो ?
बिरामीलाई उपचार गरेर स्वस्थ बनाउने तपाईंको पेशाप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन ।
तर तपाईंहरुका पछिल्ला प्रवृत्तिप्रति भने मेरा धेरै गुनासा बढेका छन् । मानवको जीवन र मरणको दोसाँधमा खटिएर औजार खेलाउने तपाईंको कर्मलाई म सधैँ सम्मान गर्दछु ।
तर त्यही सम्मानित कामलाई व्यापारमुखी बनाइएकोप्रति भने मेरो धेरै गुनासो बढ्दै गएको छ ।
तपाईंको उपचारबाट नयाँ जीवन पाएकाहरु समाजमा धेरै छन् । साथै तपाईंको लापर्बाहीको कारणले दुःख पाउनेहरु पनि यही समाजमा प्रशस्तै देखिन थालेका छन । तपाईंले औषधी कम्पनीले दिने बोनस र उपहारको पछि लागेर जथाभावी कमसल औषधी दिँदा धेरैले दुःख पाएका छन् ।
डाक्टर साहेब तपाईंले राम्रा काम गर्दागर्दै पनि तपाईंको पेशामा असाध्यै डरलाग्दो विकृति भित्रिएको तीतो यथार्थ अब तपाईंले स्वीकार गर्नै पर्ने भएको छ ।
समयमै सुधार गर्नतर्फ नलागे तपाईंको सम्मानित कर्ममा धेरै बाधा अड्चन आउनेछन् र यसको मार आम नागरिकले भोग्नु पर्ने छ ।
डाक्टर साहेब, सबैभन्दा पहिला तपार्इंले डाक्टर बन्नुभन्दा पहिला कहाँकहाँ के के भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, कृपया एकछिन ठण्डा दिमागले सोचिदिनुहोला ।
त्यसमाथि सरकारको छात्रवृत्ति पाएर पढ्ने डाक्टरसाबहरु अझै गम्भीर बन्नुपर्ने हो कि ?
के भनेका थियाैं ? के गरिरहेका छौं ? सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
प्रणाली सुधार त आफैंबाट सुरु गर्नुपर्ने होला नि । आफ्नो विगत सम्झँदै वर्तमान कर्मको समीक्षा गरेर मात्र भविष्यको चिन्ता गर्दा बेश होला ।
मैले नबुझेको कुरा, डाक्टर साहेब नेपालमा वरिष्ठ डाक्टर कति जना हो ? वरिष्ठ भनेको के हो ? वरिष्ठ हुनका लागि कति वर्ष काम गर्नुपर्ने हो ? मैले भर्खरै पढाई सकेर काम गरिरहेका डाक्टरसापका नामका अगाडि पनि वरिष्ठ झुण्डाएको देख्नु परेको छ ।
के डाक्टर हुने बित्तिक्कै वरिष्ठ भइने हो ? यति धेरै डाक्टरसापहरु वरिष्ठ भएर पनि उपचारमा हुनै नसक्ने र सुन्नै नसकिने कमजोरी किन भइरहेका छन् ? बिरामीलाई तपाईंहरुले गर्ने व्यवहार र पैसाका पछाडि तपाईंको दौडाहा गतिविधि हेर्दा मलाई लाग्छ तपाईहरु नाम वरिष्ठ, काम चाहिँ कनिष्ठ गर्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईं कुन मेडिकल र अस्पतालमा कतिखेर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर गरिने प्रचार विज्ञापन गर्ने अधिकार कुन कानुनले तपाईंलाई दिएको छ ? एउटा सचेत नागरिकले यही विषयलाई लिएर कानुनी प्रकृयामा पुगे भने तपाईको हालत के होला ? कहिल्यै तपाईंले यसबारे सोच्नु भएको छ ?
अझै मैले नबुझेको कुरा, तपाईंहरुको नाम अधिकांश मेडिकल र च्याउसरी खोलिएका गोठे अस्पताल अगाडि राखिएका बोर्डमा झुण्डिएका हुन्छन् । के त्यो तपाईंको अनुमतिमै भएको हो ? कि तपाईंको नाम बेचेर कसैले लुटिरहेको त छैन ? कि तपाईं ती मेडिकल र गोठे अस्पतालको कमिसनमा भुल्नुभएको छ ? यसबारेमा तपाईंले सोच्नुपर्ने होईन ?
एकजना डाक्टरको नाम एउटै जिल्लामा ४० वटासम्म मेडिकल र अस्पतालमा लेखेर झुन्डाएको देखिन्छ । यस्तो लाजमर्दो विज्ञापन तपाईंलाई आवश्यक छ भने तपाईं कसरी वरिष्ठ हुनुभयो ? यो त कनिष्ठ मानसिकताको उपज होइन र ?
अझै बडो अच्चम्मको कुरा, तपाईंको एउटै समय रहने गरी धेरै ठाउँमा नाम राखिएका छन् । हेर्दा पनि लाज लाग्नुपर्ने हो डाक्टरसाप तपाईंलाई । आफ्नो नाममाथिको बदनामीप्रति तपाईंको ध्यान किन जाँदैन ?
सरकारी अस्पतालमा सरकारी तलब खाएर काम गर्ने डाक्टरसाप, तपार्इंहरुको नाम सदरमुकाममा त भयो भयो, बाहिर गाउँगाउँमा रहेका मेडिकलका भित्तामा पनि झुण्डिएका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने तपाईं डाक्टरलाई यो कुन का
तपाईंले सरकारी अस्पतालमा दिनुपर्ने कार्यालय समय नै कसैको मेडिकलनुनले छुट दिन्छ ? सरकारी अस्पातलामा भन्दा बाहिर तपाई बढी व्यस्त हुनु र देखिनु तपाईंको कमजोरी हो कि होइन ? र अस्पतालमा तोकेर तपार्इंको नाम राखिएको दृष्यले हामीलाई पनि सोच्न वाध्य बनायो डाक्टरसाप ।
नेपालमा यति धेरै आम्दानी गर्ने । रातारात सम्पन्न हुने तपाईंले कर तिर्न पर्दैन र ? कर कार्यालयमा गएर बुझ्दा असाध्यै कम संख्याका डाक्टर मात्र करको दायरामा आएको पाईन्छ । यसतर्फ तपाईंको ध्यान कहिले जाने डाक्टरसाप ? राज्यलाई पाठ सिकाउन खोज्ने, आफू चाहिँ राज्यलाई कर तिर्नबाट भाग्ने, यो कस्तो काइदा हो ?
सरकारी अस्पताल र ठूला मेडिकल कलेजमा अनुहार देख्न समेत कठिन पर्ने तपार्इं डाक्टर साहेबलाई भेट्न र बोल्न, अनि समस्या राम्रोसँग राख्न पाईन्छ कि भन्दै बिरामी जँचाउन पुग्दा कहिल्यै पनि आफ्ना कुरा सबै भन्न पाउँदैनन् ।
किन त्यस्ता बिरामीसँग तपाईं खुलेर बोल्नु हुन्न ? किन तपार्इंलाई हतार मात्र हुन्छ ?
तपार्इंलाई जानकारी हुनैपर्छ कि दिनभरी ज्यामी काम गरेर कमाउने बिरामी एकदिनको ज्याला ५ सय रुपैयाँ तिरेर तपाईंसँग जँचाउन आएको हुन्छ ।
धेरै टाढा टाढाबाट आएका दुखी गरिब बिरामी तपाईँकहाँ पुग्दा ५ मिनेट समय पनि पाउँदैन । किन डाक्टरसाप यस्तो हतार ?
अनि तपाईंले कुनै पनि बिरामीको बारेमा लेखेको प्रेस्किृप्सन ठिक छ ? त्यसमा लेखिएका अक्षर प्रकार शैली के साँच्चिकै ठिक छन् ? औषधी बिक्रेताले समेत नबुझ्ने गरी लेखिएका त्यस्ता प्रेस्कृप्सन थोरै अध्ययन गरेका नागरिकले के बुझ्छन ? यसबारे तपाईंको ध्यान जानुपर्ने होइन ?
नेपालमा धेरै मेडिकल कलेज भएकाले त्यहाँ सिकारु डाक्टरसापहरुको पनि खाँचो छैन । जाने बुझेका डाक्टरसापहरुले सिकारुहरुलाई जिम्मा लगाएर छाडिदिने गरेको पनि देखिएको र भेटिएको छ । सिकारुले बिरामीको कुन हदसम्मको उपचार गर्न पाउने हो हाम्रो ठूलो जिज्ञासा छ डाक्टरसाप ।
कोही बिरामीलाई नचिनेको डाक्टरले उपचार गर्दैछन् भन्ने लाग्यो भने प्रमाणपत्र हेर्न पाउने कि नपाउने ? प्रमाणपत्र हेरेपछि मात्र उपचार गर्न दिने दिन टाढा छैन ।
तपार्इंहरुका कमी कमजोरी धेरै समयसम्म बाहिर नआएकै हुन् । सामान्य कमी कमजोरी काम गर्नेका हुन्छन् नै ।
सायद यही भएर नै नेपालका सञ्चारमाध्यमले धेरै त्यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याएनन् होला । उपचारमा कार्यरत डाक्टरसापहरुको मनोबल बढाउनु पर्छ भनेर नै सञ्चारमाध्यमले त्यसअनुसारको भूमिका खेलेकै होलान् ।
तर नागरिक सचेत भएका छन् । सहनै नसक्ने कमजोरी भएकै छन् । पछिल्ला समयमा सञ्चारमाध्यममा असाध्यै डरलाग्दा तथ्याँक र यथार्थ विवरण सार्वजानिक भएका छन् ।
कुन अस्पतालमा कुन डाक्टरको लापर्बाहीले के भयो भन्ने विषय धेरै लामो छ । प्रत्येक घटनासँग केन्द्रित भएर यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।
आवश्यक पर्दा तथ्य, तथ्याँक सुरक्षित छन् । बहस गरौँला । हरेक नागरिकले असाध्यै राम्रोसँग बुझ्न थालेका छन् । तपाईंहरुको हेलचेक्राईं बढेको अनुभूति भएकै छ ।
अन्त्यमा डाक्टरसाप, तपार्इंहरुले एकपटक गहिरोसँग समीक्षा गर्नुहोस् । के कारणले कमजोरी बढेको छ ? किन अविश्वास बढेको छ ? अब के गर्नु पर्छ ? कमजोर प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्ने ? पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने ? यि विषयमा गम्भीर हुनुहोस् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवसायमुखी भन्दा पनि सेवामुखी बनाउन पहल गरिदिनुस् । हाम्रो अपेक्षा यही हो । धन्यवाद ।
राधेश्याम खतिवडा, चितवन
July 26, 2018, 8 a.m.
तपाई मेडिकल माफिया ले खरिद गरेको लेखक हो।किनकि तपाईं ले हरेक कुरा लाई एकतर्फी रुप मा के सि लाई निचदेखाउने काम गर्नु भएको छ।तपाई लाई गरिब दुवा लागने छ।
पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग बन्द